Taariikhda Caasimada Muqdisho A-Z - Cishqi.com
Baro taariikhda caasimada Muqdisho A-Z, Mogadishu oo sidoo kale loo yaqaano Xamar waa magaalo leh taariikh fac weyn, hadaba waa sidee taariikhda Muqdisho?
Beerta Nabadda ee Magaalada Muqdisho
Markii la soo hadal qaado Taariikhda Caasimada Muqdisho, durbaba dad badani waxaa qalbigooda ku soo dhaco taariikh mug weyn leh oo ay leedahay caasimada.
Muqdisho oo sidoo kale loo yaqaano Banaadir waa caasimada Soomaaliya waana gobol kamid ah golobolada dalkeena hooyo. Hadaba inta aanan bilaabin qormadeena ku saabsan taariikhda caasimada Muqdisho waxaa fiican in aynu isweydiino su’aalahaan:
Ma jiraan aqoonyahaano wax ka qoray taariikhda caasimada Muqdisho?
Yuu ahaa shaqsigii ugu horeeyay ee noqdo Duqa magaalada Muqdisho?
Taariikhda caasimada Muqdisho yeey muhiim u tahay?
Maxaa loo la’yahay dowlad iska xilsaarto qorista, taariikhda caasimada Muqdisho iyo guud ahaan dalka?
Su’aalahaa iyo su’aalo kale oo badan looma haayo wax jawaab ah. Qof walbaa oo aad aragto wuxuu ku weydiinayaa ama ku mashquulsan yahay waxyaabo aanan muhiim ahayn sida:
Yaa iska leh Muqdisho?
Waa kuwee qabiilada degan Muqdisho?
Yaa ku badan Muqdisho, iyo waxyaabo lamid ah.
Of course Muqdisho waxaa iska leh dadka Soomaaliyeed kana dhexeeysaa, marka ma ahan in dadka qaar ay dadka la soo hor istaagaan, yaa iska leh Muqdisho?
Dadka xiiseeyo Taariikhda Caasimada Muqdisho
Dad badani oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi waxa ay isweydiiyaan oo ay jeclaan lahaayeen in ay wax ka ogaadaan taariikhda caasimada Muqdisho, haddii aan si kale u dhigo marxaladaha ay soo martay caasimada Muqdisho iyo waxyaabaha ay ku caan tahay.
Inta aanan u guda galin taariikhda caasimada Muqdisho
Xagee ku taalaa Magaalada Muqdisho?
Muqdisho waxa ay ku taalaa galbeedka badweynta Hindiya oo sidoo kale loo yaqaano Indian Ocean. Waa magaalo aad u qurux badan oo indhuhu soo jiitaan. Muqdisho waxa ay badweynta Hindiya kaga wareegsan tahay sedex jiho.
Muqdisho, caasimada dalkeena hooyo waxaa dhidibada loo aasay waqti aad u fog oo ay taariikhyahaanada aduunka isku qilaafeen. Muqdisho waxaa qiyaastii la aasaasay qarnigii 2-aad ama kii 3-aad ee taariikhda milaadiga.
Muqdisho magaalo ahaan waxa ay ahaan jirtay xarun ganacsi iyo marin kala qeybiya Hindiya iyo Yurub. Inta aan la qodin kanaalka Suweys iyo jaziirada carabta iyo xeebta Afrikada bari.
Xiligaasi xaafadaha magaalada Muqdisho waxa ay koobnaan jirtay lex xaafadood, taasoo ay degenaayeen qabiilo. Xaafad kastana waxaa xukumi jiray Sheekh. Xaafadaha wax ay lahaayeen golaha odayaasha kuwaasoo u dhaqmi jiray sida qaab federaal ah misana kulmiyo xaafadahaasi, si ay ugu tashtaan arimaha magaalada qarnigii afaraad ee miilaadiga.
Muddo kadib magaalada Muqdisho waxa ay isu bedeshayy qaab u eg saldanaad.
Magacyada degmooyinka Gobolka Banaadir
Magacyada Xaafadaha Muqdisho
Maxaa loola jeedaa Muqdisho?
Sida ku xusan taariikhda caasimada Muqdisho, magaca “Muqdisho asal ahaan halka uu ka soo jedo, waxaa la sheegay in magaalada Muqdisho ay markeedii hore la oran jiray Xamar iyo magacyo kale.
Waxaa suurtogal ah in magacyadaasi dhamaan magaalada Muqdisho loogu yeeri jiray. Waqtiyo kala duwan oo ay magaaladani qadiimka ah soo martay iyo isbedelada qaabka dhismaha.
Taariikhyahaanada ku xeel dheer qorist taariikhyada qaasatan kuwa wax ka qoray taariikhda caasimada Muqdisho, waxa ay cadeeyeen in magaca Xamar uu yahay magacii ugu horeeyay ee ay magaaladu lahayd.
In kastoo hadana ay jiraan taariikhyahaano isku qilaafay magaca Xamar, oo ah magaca bulshada ay aad u taqaano.
Macnaha erayga Xamar
Xamar waxa ay bulshada Soomaaliyeed ku macneeyaan “Alxamaraa” Qaar kalena waxa ay ku sheegeen in ay ka timid erayga Ximyar oo ahaa dowladdii Islaamka ee xukumi jirtay Yemen.
Dowladaasi waxa ay gacanta ku heysay ganacsiga xeebaha bariga Afrika oo ay kamid tahay magaalada Muqdisho.
Macnaha magaca Muqdisho
Asal ahaan macnaha magaca Muqdisho waxaa la sheegaa in uu ka yimid kalmada ama erayga “Maqcad Shaah” oo macnaheedu yahay ama lola jeedo kursiga boqorka. Haddii aan sii faah faahiyo halka ugu wanaagsan ee uu boqorku fariisto ama xaruntiisu tahay.
Sida cad Muqdisho waxaa qarnigii 6-aad ee taariikhda hijriyada xukumi jiray faarisiinta. Waxaan Soomaalida ku adkaaday ku dhawaaqida Maqcad Shaah, waxa ayna u bedesheen Magaca hadda jiro.
Magaca Maqcad waa Af Carabi, halka magaca Shaah uu yahay faarisi, macno ahaanna uu noqonayo boqor. Markaa taas mala dhhi karo oo maloo macneyn karaa in magaalada Muqdisho aasaasideeda dadka faarisiiyiinta ay qeyb ku lahaayeen, maxaa yeelay waxaa laga isticmaali jiray erayada faarisiga magaalooyinka carabta iyo Xeebaha Soomaaliya waqti aad u fog.
Sida ku xusan taariikhda Muqdisho waxa ay badi taariikhyahaanadu qireen, in magaalada Muqdisho uu Islaamku soo gaaray inta ay magaaladaas soo shaac bixin.
Markii ay dadka magaalada dhamaan diinta Islaamka ay wada qaateen oo ay noqdeen dad aad looga yaqaano gobolka. Taasi waxa ay keentay in dhamaan xeeaha Afrikada bari oo ka kooban Sansibaar, Soomaaliy, jabuuti loogu yeero Muqdisho.
Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho markii ay dadka Islaamka galaeen, markaas oo ahayd qarnigii 1-aad ee taariikhda hijriyada. Waxa ay dadkaasi noqdeen darbiyadii aadka u difaayay Islaamka Afrika.
Duqii ugu horeeyay ee galay taariikhda caasimada Muqdisho
Kumuu ahaa duqii ugu horeeyay magaalada Muqdisho? Kaasoo ah Soomaali?
Jawaabta: Cali Cumar Sheegow.
Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaa guud ahaan soo maray duqyaal fara badan, waxaana halkaan hoose ku diyaarinay magacyadooda iyo taariikha laga xusuusto.
Liiska magacyada Duqa Magaalada Muqdisho
Sida taariikhda Muqdisho la xusuusan yahay waxaa guud ahaan soo maray gudoomiyeyaal fara badan oo isugu jira Ajnabi iyo Soomaali.
10 kamid ah duqa magaalada Muqdisho waa Talyaani, kuwasoo xukumayay intii u dhexeysay 1936 ilaa 1953 dii.
Magacyada duqa magaalada Muqdisho Ajnabi iyo Soomaali
Dr. Compani Romeo, Podesta, 1936
Rag Scarpa, Podesta, 1937
Dr. Sicar, Podesta, 1937
Dr. Barbano Luigi, Podesta, 3-6-1937
Dr. Banidno Marco, Captan Podesta, 3-6-1937
Guliano Sanaotore, Podesta, December, 1938
Dr. Pantelli Pietro, Gudoomiye Idman, Febraayo, 1941
Olivieri Aliveri, Gudoomiye Idman, Abril 1941
Oliviero Enrico, Juun 1950, Madax Maamulkii Muqdisho
Vecco Cario, Madaxa magaalada Muqdisho 1953
Caaqil Axmed Raage Duq Magaalo Sannadjii 1955
Maxamed Sheekh Jamaal Cabdullaahi, Duq Magaalo, 1956
Axmed Muudde Xuseen, Duq Magaalo, November, 1958
Dr. Keenidiid Axmed Yuusuf, Guddoomiye Idman, 30-ki Agoosto 1962
Axmed Muudde Xuseen, Duq Magaalo, 2-di Jannaayo 1966
Cumar Xasan Maxamuud (Istarliin), Duq Magaalo, Febraayo, 1969
Dr. Shariif Maxamed Caydaruus, Duq Magaalo, Maarso, 1969
G / Sare Axmed Maxamuud Cadde, Guddoomiye Idman, 20-November November 1969
G / Sare Cusmaan Maxamed Jeelle, Guddoomiye Idman, Dec. 8, 1970
G / Sare Xasan Abshir Faarax, Duq Magaalo, 20-kii March 1973
Yuusuf Ibraahim Cali (Abuuraas), Duq Magaalo, Febraayo, 1978
Dr. Kabdullaahi Salaad Warsame, Guddoomiye, May, 1981
G / Sare Xasan Abshir Faarax, Duq Magaalo, 1982
Cali Ugaas Cabdulle, Duq Magaalo, 1987
Sayid Cumar Xaaji Maxamed, Duq Magaalo, 1990
S / Guuto Axmed Jilacow Caddow, Duq Magaalo, 18-kii Oktoobar, 1990
Cabdullaahi Gacal Sabriye, Duq Magaalo, 1991
Cabdullaahi Muuse Xuseen, Duq Magaalo, 2000
Dr Xuseen Cali Axmed, Duq Magaalo, 2003
Maxamuud Xasan Cali (Cadde), Duq Magaalo, 2005
Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere), Duq Magaalada 28-4-2007
Maxamed Cusmaan Cali Dhagaxtuur November 2008 – November 2009
Eng.Cabdirisaq Maxamed Nuur / Guddomiyaha Gobolka Banaadir 2009
Maxamud Axmed Nuur Tarsan Duqa Magaalada ahna Gudoomiyaha Gobolka 2010-2013
Xasan Maxamed Xuseen (Mungaab) Duqa Magaalada 2013-2014
Yuusuf Xuseen Jimcaale (madaale) duqa magaalada 2015-2016
Thabit Abdi Mohamed Duqa Muqdisho Ahna Gadoomiyaha Gobolka banaadir 2017
Eng. C / raxmnaan Cumar Cismaan (YariIsow) Duqa Muqdisho banaadir 21 Janaayo 2018
Qish: Qormooyin kale oo xiiso leh
Erayo macaan oo aad ku soo jiidan karto xaaskaaga
Dhibaatooyika ay siigada u keento dhalinyarada
Sawirada Muqdisho 2021
Muqdisho Mall, Degmada Xamar Weyne
Beerta Daarusalaam, Degmada Dayniile, Muqdisho
Taalada Axmed Gurey ee KM4, Degmada Hodan, Muqdisho
Horumarka Magaalada Muqdisho 2021 + Sawiro